Iiminyaniso zeBhayibhile malunga nokuzixabisa nokuzithemba
IZibhalo ezithembekileyo kunye nokuzinyamekela kwabaselula abangamaKristu
Ngokuqinisekileyo iBhayibhile inokuthetha ngokuzithemba, ukuzixabisa nokuzihlonela.
IBhayibhile iyasitshela ukuba ukuxabiseka kwethu kunikwa kuThixo. Uyasinika amandla kunye nakho konke esikudingayo ukuze siphile ubomi bobuthixo.
Ukuthembela kwethu kuvela kuThixo
Ndiyakwenza konke oku kudibanisayo. (NIV)
2 Timoti 1: 7
Kuba uMoya uThixo asinike wona awusenza sibe nehlazo, kodwa usinika amandla, uthando, nokuzimela.
INdumiso 139: 13-14
Nguwe ondibeka ndawonye ngaphakathi komzimba kamama, kwaye ndikudumise ngenxa yeendlela ezimangalisayo ozidalileyo. Yonke into oyenzayo iyamangalisa! Kule nto, andithandabuzeki. (CEV)
IMizekeliso 3: 6
Funa intando yakhe kuyo yonke into oyenzayo, kwaye uya kukubonisa indlela oza kuyithatha. (NLT)
Ngokuba iNkosi iya kuba yintembelo yakho kwaye iya kugcina inyawo lakho lingabanjwa. (ESV)
INdumiso 138: 8
INkosi iya kugqibelela into endikhathazayo; inceba yakho, Nkosi, ihlala ngonaphakade; ungashiyi imisebenzi yezandla zakho. (KJV)
Ndifile, kodwa uKristu uhleli kum. Kwaye ngoku ndiphila ngokukholwa kuNyana kaThixo, owamthanda waza wanikela ubomi bakhe ngenxa yam. (CEV)
1 kwabaseKorinte 2: 3-5
Ndiza kuwe ebuthakathaka-ndinamahloni kwaye ndithuthumela. Kwaye isigidimi sam nokushumayela kwam kwacaca. Kunokuba sisebenzise iingxoxo eziqilileyo nezikholisayo, ndathembela kuphela ngamandla kaMoya oyiNgcwele . Ndenza oku ukuze ungathembeli ekuhlakanipheni komntu kodwa ngamandla kaThixo.
Kodwa niya kwamkela amandla xa uMoya oyiNgcwele efikile kuni, niya kuba ngamangqina eJerusalem naseJudiya lonke nakwiSamariya, kuze kube sekupheleni komhlaba. (NKJV)
Ukwazi Owethu NgoKristu Usikhokela Ngendlela kaThixo
Xa sibheke ulwalathiso , kunceda ukwazi ukuba singubani kuKristu.
Ngale lwazi, uThixo usinika ukuqinisekiswa esikufunekayo ukuhamba endleleni asilungiselele yona.
Hebhere 10: 35-36
Ngoko, musa ukulahla ithemba lakho, elinomvuzo omkhulu. Kuba unesidingo sokunyamezela, ngokokuba xa wenze intando kaThixo, unokufumana into ethembisiwe. (NASB)
Kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo, owaqala umsebenzi omuhle ngaphakathi kuwe, uya kuqhubeka nomsebenzi wakhe de ugqityiwe ngomhla wokubuya kukaKristu Yesu . (NLT)
Ngoko ke ningakhathazeki ngengomso, ngokuba ngomso uya kuzixhalabisa. Usuku ngalunye lunenkathazo eyaneleyo yalo. (NIV)
Ngoko masize ngesibindi esihlalweni sobukhosi bukaThixo wethu onomusa. Kulapho siya kufumana inceba yakhe, kwaye siya kufumana ubabalo ukusinceda xa sifuna kakhulu. (NLT)
UThixo uyababasikelela abo banyamezela ukuvavanywa nokulingwa. Emva koko, baya kufumana isithsaba sobomi uThixo asithembise abo bamthandayo. (NLT)
Yaye abo babemisele ngaphambili, Wabiza; Abo babememezayo, Walungisa; yaye abo awalungisile, wazukisa. (NASB)
Njengoko sikhula ngokholo, ithemba lethu kuThixo likhula. Uhlala ekhona kuthi.
Ungamandla ethu, ikhuselo lethu, umncedi wethu. Ukukhula ngakumbi kuThixo kuthetha ukukhula ngakumbi kwiintembelelo zethu.
Ngoko sithi ngokuzithemba, "INkosi yam ngumsizi wam; Andiyi kuyika. Yintoni abantu abanokuthi bangayenza kum? "(NIV)
INdumiso 27: 3
Nangona umkhosi ungqinezele, intliziyo yam ayiyikiyika; nangona imfazwe iphuma kum, kwandula ke ndiya kuqiniseka. (NIV)
Yoshuwa 1: 9
Lo ngumyalelo wam-qinisa kwaye ube nesibindi! Ungesabi okanye udimazeke. Kuba uYehova, uThixo wakho unawe naphi na apho uya khona. (NLT)
Uthando olunjalo aluyiloyiko kuba uthando olugqibeleleyo lukhupha konke ukwesaba. Ukuba sinoyiko, ngenxa yokwesaba isijeziso, kwaye oku kubonisa ukuba asizange sibone ngokupheleleyo uthando lwakhe olugqibeleleyo. (NLT)
Jabulela eNkosini rhoqo. Ndiya kuthi, vuyani! Vumela ukuba nobubele bakho baziwe kubo bonke abantu.
INkosi isondele. Musa ukukhathazeka nganto; kodwa kukho konke ngokuthandaza nangokuncenga, ngokubonga, izicelo zakho maziziwe kuThixo; Yaye uxolo lukaThixo, oludlula konke ukuqonda, luya kulinda iintliziyo zenu kunye neengqondo ngoKristu Yesu. (NKJV)
2 kwabaseKorinte 12: 9
Wathi ke kum, Ubabalo lwam bukunelisekile, ngokuba amandla am apheleliswa ebuthakathakeni. Ngenxa yoko ndiya kuqhayisa ngokunyaniseka kwam ubuthakathaka bam, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwam. (NIV)
2 Timoti 2: 1
UTimoti, mntanami, uKristu Yesu unomusa, kwaye kufuneka umvumele akomelele. (CEV)
2 Timoti 1:12
Yingakho ndibuhlungu ngoku. Kodwa andinamahloni! Ndiyamazi lowo ndinokholo kuye, kwaye ndiqinisekile ukuba unako ukulinda de kube ngumhla wokugqibela into endithembele ngayo. (CEV)
Kodwa abo abathemba eNkosini baya kuvuselela amandla abo. Baya kuhamba ngamaphiko njengama-eagles; baya kugijima baze bangakhathali, baya kuhamba baze bangadangali. (NIV)
Ngoko musani ukoyika, ngokuba ndinani; Musa ukukrakra, ngokuba ndinguThixo wakho. Ndiza kukuqinisa nokukunceda; Ndiya kukusekela ngesandla sam sokunene. (NIV)
Ehlelwe nguMary Fairchild
I-Snowy Scares: Iimfesane ezibuhlungu zokutya iiNtswelo zakho zasebusika
I-Superman Supest yamahlaya ka-2000
Indlela yokwenza i-Layback Spin